တရားသဖြင့် နေထိုင်သူ - ရတနာဝါသ ဘုရားကျောင်း 華緬 三寶寺
Posted by ukkmaung on August 18, 2012 at 10:00pm
ကိုယ်မလိုချင်တာ သူများကို လုံးဝ မပေးပါနှင့်
ကိုလိုချင်တာ သူများကို အကုန်လုံးပေးပါ။
ဆရာတော်ကြီးရဲ့ ဘွဲ့တော်နဲ့ နေရပ်ကိုတော့ ဆရာတော်ကြီး မိန့်ကြားလိုက်တဲ့" ကယ် ပေါက် " ဆုံးမစကားကြောင့် မဖော်ပြလိုက်ရတာပါ။(ကယ်ပေါက်ကို သီးခြားရေးပါဦးမယ်)
အထက်မြန်မာပြည်က မြို့တစ်မြို့မှာ မိမိနဲ့ ဆရာတူတပည့်လည်းဟုတ်၊ ငယ်စဉ်က စာသင်ပေး ခဲ့ရဖူးတဲ့ တပည့်လည်း ဟုတ်တဲ့ ဆရာတော်လေးတစ်ပါးက စာချဘွဲ့ ရလို့ဆိုပြီး ပြုလုပ်တဲ့ ဂုဏ်ပြုပွဲ တစ်ခုမှာ သက်တော် ၉၄ နှစ်ရှိပြီဆိုတဲ့ ဆရာတော်ကြီးတစ်ပါးကိုလည်း ဖူးမြင်လိုက်ရတာ စိတ်ထဲမှာ အေးချမ်းမှု တစ်ခုကို ခံစားလိုက်ရသလို အတော်လေး ကြည်ညိုစိတ် ဖြစ်ပေါ်လာပါတယ်။
မိမိတည်းခိုတဲ့ တပည့်ဓမ္မကထိကလေး ကျောင်းပြန်ရောက်လို့ ဆရာတော်ကြီး အကြောင်း ပြောပြတော့ ကျောင်းထိုင် ဓမ္မကထိကလေးနဲ့ သူ့နောင်တော်တို့က သူတို့လည်း အလား တူစိတ်မျိုး ဖြစ်ပေါ် ကြည်ညိုတဲ့အတွက် မကြာမကြာ သွားရောက်ပြီး ဝေယျာဝစ္စပြုပေးလေ့ရှိ ကြောင်းနဲ့ ဆရာတော်ကြိးနဲ့ တွေ့ကြုံကြဖူးတဲ့ တခြားဆရာတော် သံဃာတော်များနဲ့ ဒကာ ဒကာမတို့ကလည်း အလားတူ မှတ်ချက်ချ ကြကြောင်း ပြောပြပါတယ်။
ဒီခရီးမှာ နောက်ထပ် သာမဏေကျော် ဘွဲ့ရဆတဲ့တပည့် သာမဏေတစ်ပါးရဲ့ ဂုဏ်ပြုပွဲက ငါးရက်လောက်ခြားပြီး စောင့်နေရဦးမှာဖြစ်လို့ အတော်လေး အချိန်ရတဲ့အတွက် နောက်နေ့ညနေ ပိုင်းမှာ ဆရာတော်ကြီး အသုံးတည့်ပုံရတဲ့ အိုဗာတင်းဘူးနဲ့ ဆေးမျိုးစု့တို့ကို ကပ္ပိယနဲ့ စီစဉ်ခိုင်းပြီး ဓမ္မကထိက ညီနောင်နဲ့အတူ ဆရာတော်ကြီး သီတင်းသုံးနေထိုင်တဲ့ တောရကျောင်းတိုက်ကို သွားကြပါတယ်။
ဆရာတော်ကြီးက သက်တော်နဲ့ မမျှလောက်အောင်ကို သွားလာလှုပ်ရှားနိုင်တုန်းပါပဲ။ မျက်စိတို့ နားတို့၊ သွားတို့ကလည်း သုံးလို့ရနေဆဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အတူပါလာတဲ့ တပည့်များက အကျိုး အကြောင်းလျှောက်ထား မိတ်ဆက်ပေးပြီးတော့ အားလုံး ကန်တော့ကြပါတယ်။ ကန်တော့ပြီးတဲ့အခါ သြ၀ါဒစကားလေး ချီးမြှင့်ပေးဖို့ လျှောက်ထားတော့ "ဘာမှ အထွေအထူး သြ၀ါဒ ပေးစရာရယ်လို့ မရှိပါဘူး။ ရဟန်းဆိုရင် ရဟန်းနဲ့တူအောင်နေ၊ လူဆိုရင် လူနဲ့ တူအောင်နေ၊ ဒါပဲ အရေးကြီးဆုံးမို့လား။ အဲဒီလို နေကြရုံပေါ့လို့" မိန့်ကြားပြီး တခြား စပ်မိစပ်ရာ မေးမြန်းပြောဆို နေပါတယ်။
ဆရာတော်ကြီးက မျက်နှာတော် ကြည်လင်အေးဆေးသလို အသံကလည်း အေးအေး၊ စကား လည်း အေးအေးပါပဲ၊ တော်တော်လေး စကားစပ်မိပြီးလို့ တရင်းတနှီးလို ဖြစ်လာတဲ့အခါ မိမိက…
"ဆရာတော်ဘုရား၊ တပည့်တော် ဆရာတော်ကြီးကို ဖူးမြင်လိုက်ရတဲ့ အချိန်မှာပဲ ဆရာရင်း တစ်ပါးလိုကို တွေ့လိုက်ရသလို ကြည်နူးစိတ်၊ ကြည်ညိုစိတ် ဖြစ်လာပါတယ်ဘုရား၊ တည်းခိုတဲ့ကျောင်း ပြန်ရောက်တော့ ဟောဒီ တပည့်များနဲ့ စကားစပ်မိတဲ့အခါ ဆရာတော်ကြီးနဲ့ ဖူးတွေ့ဖူးကြတဲ့ တခြားဆရာတော်၊ သံဃာတော်တွေနဲ့ ဒကာ ဒကာမတွေကလည်း တပည့်တော်ပြော သလိုပဲ ပြောကြတယ်လို့ သိရပါတယ်ဘုရား။ တပည့်တော်တို့ နည်းယူ လိုက်နာရအောင် ဆရာတော် အမြဲ နှလုံးသွင်းတဲ့တရားနဲ့ ဆရာတော် ကျင့်သုံးနေတဲ့ စရဏ လေးများကို တပည့်တော်တို့ သိခွင့်ပြု ပေးပါဘုရား"လို့ လျှောက်ထားတော့ ဆရာတော်ကြီးက ခဏလောက် စဉ်းစားနေပါတယ်။
ပြီးတော့မှ စောစောကပြောတဲ့ တပည့်မျေားဘက်ကို မျက်နှာတစ်ချက် လှည့်ပြီး "သူတို့ကတော့ ဓမ္မကထိကတွေဆိုတော့ ဒီလိုပဲ တစ်ဖက်သား စိတ်ချမ်းသာအောင် ပြောကြ တာပါပဲ။ အေးပေါ့လေ- ဘုန်းကြီးက တရားနည်းလမ်းကို လျှို့ဝှက်ထားတယ်လို့ ထင်နေဦးမယ်။ မောင်ပဉ္စင်း သိချင်သပဆိုရင်လည်း ကိုယ်နှလုံးသွင်း ကျင့်သုံးနေတာလေးတော့ ပြောပြနိုင် ပါတယ်။
အထွေအထူးတော့ မဟုတ်လှပါဘူ။ ဘုန်းကြီးတို့ ဆရာသမား ဆုံးမခဲ့တဲ့ စကားသုံးခွန်းရှိ တယ်။ အဲဒီအတိုင်း တတ်နိုင်သမျှ လိုက်နာကျင့်သုံးနေတာပါပဲ။ ဘုန်းကြီးတို့ စာသင်တိုက် သွားခါနီးတော့ ဆရာသမားက ဘာမှာသလဲဆိုတော့….
"ကိုယ်မလိုချင်တာ သူများကို လုံးဝ မပေးပါနဲ့။
ကိုယ်လိုချင်တာ သူများကို အကုန်လုံးပေးပါ။
သတ္တ၀ါဆိုတာ လူတွေမဆိုထားနဲ့ တိရစ္ဆာန်တောင် ဆဲရေးတိုင်းထွာတဲ့စကား၊ ကြမ်းတမ်း တဲ့စကားကို မကြိုက်လို့ မြတ်စွာဘုရားရှင် ဟေားထားတာလည်း ရှိတယ်လေ။(နန္ဒ၀ိသာလဇာတ်)အကျိုးမဲ့အောင် လိမ်ညာတာတို့၊ အချင်းချင်းစိတ်ဝမ်းကွဲအောင် ကုန်းတိုက်တာတို့ လည်း အတူတူပဲပေါ့။ ကိုယ်မကြိုက် တာတွေ သူများကို လုံးဝ မပေးမိအောင် စောင့်စည်းပြီးတော့ နေရမှာပေါ့။
ဘယ်သူမဆို ကိုယ်ရောက်တဲ့နေရာမှာ မျက်နှာကြည်သာတာ၊ ဖော်ဖော်ရွေရွေ နှုတ်ဆက်ကြို ဆိုတာကို တွေ့ရရင် ၀မ်းသာကျေနပ်ကြတာပဲမို့လား။ ကိုယ့်ဆီရောက်လာတဲ့ ဧည့်သည်ကိုလည်း ကိုယ်က အဲဒါမျိုး ပေးရမှာပေါ့။ ဒီနေရာမှာ စကားစပ်မိလို့ သတိပေးရအုံးမယ်။ ခရီးဝေးက ရောက်လာတဲ့ ဧည့်သည်မျိုးကျတော့ နှုတ်ဆက်ပြောဆိုတာလောက်ပဲလုပ်၊ စကားကြောတွေ သိပ်ပြီးရှည်မနေနဲ့ဦး။ ခရီးရောက် မဆိုက်မှာ အရင်ဆုံး လိုအပ်တာက ရေသောက်စရာတို့၊ အပေါ့အလေးသွားစရာတို့၊ ခြေဆန့် လက်ဆန့် နားနေချင်တာတို့ကလည်း လူတိုင်း လိုချင်တဲ့ အရာပဲ။ အဲဒါတွေကို အရင်ပေးရ တယ်။
စကားအရာနဲ့ ပတ်သက်လို့ မြတ်စွာဘုရားကို ဆန့်ကျင်ဘက် ပုဏားတွေကတောင် ချီးကျူး ရတဲ့ အချက်တွေ ရှိတယ်လေ။ အဲဒါတွေကလည်း အတုယူစရာတွေပေါ့။
ဧဟိသွာဂတ၀ါဒီ= ကောင်းသောလာခြင်းပါလို့ ပြောဆိုလေ့ရှိတယ်။
သခိလော ချိုသာ ဧကြည် ပြောဆိုတတ်တယ်။
သမ္မောဒကော နွမ်းသူကို လန်း၊ ပန်းသူကို ပြေစေလောက်အောင် ခရီးကြိုစကား ပြော ဆိုတတ်တယ်။
အဗ္ဘာကုဋိကော= မျက်စောင်းမထိုး၊ မကျိုးမျက်မှောက်၊ ဖြောင့်ဖြောင့် ချစ်ကြည် ကြည့်ရှု့ လေ့ရှိတယ်။
ဥတ္တာနမုခေါ= ပြောဆိုဆက်ဆံရ လွယ်ကူတယ်။
ဗုဗ္ဗဘာသီ= ပြောဆိုသင့်တဲ့ စကားကိုဘုရားရှင်ကပဲ စပြီးပြောတယ်လို့ ဆိုသမို့လား။
ဒီ နောက်ဆုံးအချက်က အရေးကြီးတယ်နော်။ အဇာတသတ်မင်းကြီး ဘုရားရှင်ထံ ပထမဆုံး ရောက်လာတုန်းက သူ့အပြစ်သူ လိပ်ပြာမလုံလို့ စကားမပြောဝံ့ဘူးလေ။ ဘုရားရှင် ကစပြီး နှုတ်ခွန်း ဆက်လိုက်တော့မှ မေးရဲ လျှောက်ရဲဖြစ်ပြီး ရဟန်းပြုခြင်းရဲ့ မျက်မှောက်အကျိုး တွေကို လျှောက်ထားလို့ သာမညဖလသုတ်ကြီး ဖြစ်ပေါ်လာတာမို့လား။ အဲဒါတွေကို ကိုယ်က သူများကို အကုန်ပေးရ မယ်တဲ့။
ကာယကံနဲ့ ပတ်သက်ရင်လည်း ဒီအတိုင်းပဲပေါ့။ မြတ်စွာဘုရား ဟောတော်မူတဲ့ `အတ္တာနံ ဥပမံကတွာ၊ နဟနေယျ နဃာတယျေ´ဆိုတဲ့အတိုင်း အရှင်မဟာရဋ္ဌသာရကတောင် လင်္ကာလေး စပ်ထားတာ ရှိတယ်လေ။ "ကိုယ်နှင့်လည်းစာ၊ သတ္တ၀ါကို၊ ကြင်နာလှစေ၊ သူ့အသတ်ကို ချစ်ပါလေ" ဆိုသလို ပြုလုပ်ရမှာပေါ့။
မနောကံနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း ကိုယ်ချင်းစာစိတ် ထားရတာပါပဲ။ ဘယ်သူမဆို အစာ ၀ချင် တယ်၊ အနာ ကင်းချင်းတယ်၊ ဘေးအန္တရယ် ကင်းရှင်းချင်ကြတယ်မို့လား။ အဲဒီတော့" သတ္တ၀ါအား လုံး စာဝ၊နာကင်း၊ ဘယာရှင်းကြပါစေ"ဆိုတဲ့ မေတ္တာစိတ် အမြဲပွားပေးပေါ့။ ဒါကတော့ ကိုယ့်ဆရာသမား ဆုံးမခဲ့တာကို ကိုယ်သဘောပေါက်သလောက် အဓိပ္ပာယ် ကောက်ယူတာ ပေါ့။ အဲဒီအတိုင်း တတ်နိုင်သလောက် လိုက်နာကျင့်သုံးတာပါပဲ။
အဲ…. စောစောက ဟိုကောင်လေးတွေပြောသလို တွေ့ကြမြင်ကြသူတွေရဲ့ စိတ်ထဲမှာ ဖြစ်ပေါ် လာကြတယ်ဆိုတာဟာ ဟုတ်တယ် ဆိုရင်ပေါ့လေ( သူ့မြေး တပည့်နှစ်ပါးဘက်ကို မယုံကြည်သလို နဲ့ ပြုံးပြီး ကြည့်လိုက်သေးတယ်) အဲဒါလည်း ကိုယ်ပေးထားတဲ့အတိုင်း ကိုယ် ပြန်ရတယ်လို့ပဲ ဆိုရမှာပေါ့။ အဲဒါပါပဲ။ ဘာမှ အထွေအထူး မဟုတ်ပါဘူး"လို့ မိန့်ကြား တော်မူပါတယ်။
ဒါတွေဟာ ဆရာတော်ကြီး အနေနဲ့ အထွေအထူး မဟုတ်ဘူး ဆိုပေမယ့် မိမိတို့အတွက် တော့ မထူးဘဲနဲ့ ထွေနေကြတုန်းပါ။
ကိုယ် လုံးဝမလိုချင်ပေမယ့် သူများကိုကျတော့ အလျှံပယ် ပေးမိကြတာတွေ။
ကိုယ့််အတွက်တော့ အလျှံအပယ်ရချင်ပေမယ့် သူများကိုတော့ လုံးဝ မပေးမိတာတွေ။ တွေးကြည့်လိုက်ရင်တော့ ကိုယ်ပေးထားတဲ့အတိုင်း ကိုယ်ပြန်ရလာမယ့် အလှည့်မှာ" ကောက်ရိုးပုံကြီးကို တစ်နေကုန် ဖြဲရှာမှ ဆန်တစ်စေ့ပဲ အနိုင်နိုင်ရတယ်" ဆိုတာမျိုးတောင် ဟုတ်မှ ဟုတ်ပါ့မလား။
တောရဆရာတော်ကြီးနည်းတူပဲ၊ တခြား ဆရာတော်တစ်ပါးကလည်း မိန့်ကြားဖူးပါတယ်။
"ကိုယ်တွေ့ကြုံ ခံစားရတဲ့အခါ `ဒါကတော့ သက်သက် မတရားတာပဲ၊ ကျေကို မကျေနပ်ဘူး´ ဆိုတာမျိုးကို သူများ လုံးဝ မပေးမိအောင်နေပါ။ အဲဒါကို မတရားမှုကင်းပြီး အသက်ရှင်နေထိုင်သူ ဖြစ်မယ်။
ကိုယ်တွေ့ကြုံခံစားရတဲ့အခါ`ဒါမျိုးတော့ တရားတယ်၊ မျှတတယ်၊ ၀မ်းသာကျေနပ်စရာ ကောင်းတယ်´ဆိုတာမျိုး သူများကို ပေးနိုင်သလောက်ပေးပါ။ ဒါဆိုရင် လောကမှာ တရားသဖြင့် အသက်ရှင်နေထိုင်သူဖြစ်ပြီ´တဲ့။
မြတ်ဗုဒ္ဓအလိုတော်အရ သတ္တ၀ါတိုင်းမှာ တူညီတဲ့ အခြေခံအခွင့်အရေး နှစ်ခုစီ ရှိကြ ပါတယ်။
"ပြုလုပ်ပိုင်ခွင့်" နဲ့ "ခံစားခွင့်" (ကံနဲ့ ကံ၏ အကျိုး) ဖြစ်ပါတယ်။ ပြုလုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ဆိုးဆိုးဝါးဝါး အသုံး ချသူဟု ခံစားခွင့်ကိုလည်း ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ခံယူရမယ်။ ခံစားချိန်ရောက်မှ ငြင်းပယ်ခွင့် မရှိဘူး။ ပြုလုပ် ခွင့်ကို ကောင်းကောင်း မွန်မွန် အသုံးချသူဟာ ခံစားခွင့် ကောင်းကောင်းမွန်မွန် ရရှိမယ်။ တောင့်တ နေစရာ မလိုဘူး။ ဒါဟာ ကမ္မဿကတလမ်းစဉ် မှန်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
တရားသဖြင့် သက်ရှင်နေထိုင်သူများ ဖြစ်စေသော်။